ညနေခင်းသတင်းများ ( ၂ဝ၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်)
ညနေခင်းသတင်းများ ( ၂ဝ၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်) 4.5
( ၂ဝ၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်)
- အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းလေးဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကျိုင်းတုံမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊
- ဝန်ကြီး၊တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ဖြည့်စွက်ဖို့ တပ်မတော်တင်သွင်း၊
- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရန်ကုန်မြို့က ဘာသာပေါင်းစုံနေရာဌာနတွေကို လှည့်လည်လှူဒါန်း၊
- မကွေးတိုင်းချောက်မြို့မှာအပိတ်ခံထားရတဲ့ ဗလီနှစ်လုံးကို ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေး၊
- ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒေါ်နော်အုန်းလှနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကို အင်းစိန်ထောင်ပို့၊
- မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအချက်အလက်ရှာဖွေရေး FFM အဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်၊
- ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်သွားရောက်လေ့လာမယ့်အစီအစဉ် တရုတ်ကမ်းလှမ်း၊
- ကုလအဖွဲ့အစည်းတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်သွားရောက်ခွင့်ပြုဖို့ ကုလဆိုင်ရာဗြိတိန်သံအမတ်တောင်းဆို၊
တကယ်လား အဟုတ်လား အစစ်လား တခဏပဲလား အမြဲလား တကယ်ပဲပြောင်းလည်းသွားပြီလား သာဓု သာဓု
ဟနျဆောငျ မလုပျပါနဲ့ ဗိုလျခြုပျ မငျးအောငျလှိုငျ
Author — salama arkani
whywhywhywhy? Why didn't you do before?
Author — Kang kang
Sadu...sadu...sadu...Senior General Min Aung Hlaing. Thanks for doing the Right Thing!!!
Min Aung Hlaing ga, ka lar net three brothers army's goh pin kan dog mal.
ကုလသမ္မဂ. ကအား​နေရင်​ မြန်​မာ ကိုဝင်​စွက်​မဲ့အစား အချိုးကျ ။
Sardu! Sardu! Sardu!, I am certain this is not the case of merely abating international concern butacase of roping in all religious groups for harmony and togetherness. LOYALTY to own's government is EVERYTHING.
ဗိုလ်မောင်မောင်က တရုပ်ဘဲလေ။ အရင်ဖြုတ်ပါ
Author — Johny Htun
Yanhelee အနေနဲ့ ကကိုယ်နဲ့ အခွငိ့ အရေးကိုပိုလုပ်သင့် ပါတယ် ..
Author — Dr. Tim Wynn
ကိုယ်​တိုင်​ နယ်​လှည့်​ အ​ရောင်​ပြလားး​တော့မသိဘူးး ဗျာာ အဘ​တေက ​လေ
Author — Mimi Mimie
မြန်မာသမိုင်း ပြည်သူအကျိုးပြု ကောင်းချင်းတွေနဲ့ သမိုင်းမှာ ချန်ခဲ့မှာ
Author — Mintoto Thuthu
ဘာ လူ့အခွင့်ရေးလဲ အဲလူ့အခွင့်ရေးဆိုတာက. မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံကိုသာ
ပြောဆိုကာ ပြုလုပ်နေတဲ့ လူ့ခွင့်ရေးစကားပါ ခဗျား တို့. သတင်းသမားတွေက. မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး တိုင်းတပါးကို မျက်နာလုပ်ပြီး လစာငွေယူကာ
ကိုကောင်းစားဖို့အတွက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်က. သတင်းတွေကို နိုင်ငံတကာကို ကြေညာပေး ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း နိပ့်ကွတ်ကာ မကောင်းသောသတင်း
လုပ်ကာဖန်တီးပြောဆိုပြီး သခင်အားရ. ကျွန်ပါးဝ. အမေရိကန်နဲ့. မတည့်တဲ့ နိုင် ငံတွေကိုဆို အပြက်ပြော ချုံးချ
မကောင်းကြောင်းပြော တည့်တဲ့နိုင်ငံဆို ကောင်းတာတွေပဲလွှင့် မကောင်းတာဘေးဖယ် ကောင်းတာတွေပဲကျေညာမယ် အမေရိကျန်က. လက်နက်တွေ အမျိုးထုပ်နေတာတွေကြတော့
ဘာမှမပြေ. အပြက်မတင် မြောက်ကိုးရီးယားကြတော့ အပြက်ပြော အပြက်တင် ခဗျားတို့. သတင်းဌာနတွေက. အလိမ်အညာ တွေနဲ့. သခင်အားရ. ကျွန်ပါးဝနေကြတာ လူတိုင်းကသိတယ် ခဗျားတို့ သေရင် အဲဒီ အဆင့်ရာထူးတွေ ခဗျားတို့တမလွန်ထိပါလာမယ်လို့. ထင်နေလို့လား
Min Aung Hlaing why you afraid Muslims now, all our Muslims never forgive you, you should be ICC.
Author — စုကြည် ဥဖျက်နေသည်
ဆော်ဒီရေနံလုပ်ငန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ အမေရိကန် တုံ့ပြန်မှု
အိုငျစီဂြေ အမှု မွနျမာ အစီရငျခံစာအပျေါ ဂမျဘီယာဝနျကွီးနဲ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးခနျး - BBC News မွနျမာ
RFA နစေ့ဉျတိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြ (၂ဝ၂ဝ မေ ၂၆ ညပိုငျး)
ညနေခင်းသတင်းများ ( ၂ဝ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂ဝ ရက်)
ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ခြေလှမ်းသစ် ဘယ်လဲ၊ ဘာလဲ - BBC News မြန်မာ